Macluumaadka Codeynta ee Dutchtown iyo South Side • DutchtownSTL.org
Go'aaminta Dutchtown: Codee!
Macluumaadka loogu talagalay Cod-bixiyeyaasha Dutchtown
Macluumaadka Codeynta ee Qof walba
Isticmaal Translate badhanka ku yaal menu-ka sare ama tag annaga bogga tarjumaadda si aad u hesho macluumaadka codbixinta ee Isbaanishka, Fiyatnaamiis, Carabi, Nepali, iyo inbadan.
Iyadoo lala kaashanayo Isbahaysiga Cadaaladda ee Dutchtown, waxaan u ururinay macluumaad muhiim ah codbixiyaasha xaafada Dutchtown.*
Maaddaama aan nahay xaafadda ugu weyn uguna dadka badan magaalada St Louis, deriskeennu waxay saameyn xoog leh ku yeelan karaan doorashooyinka maxalliga ah maxaa yeelay magaalada Dutchtown, waxaan nahay kumanaan codbixiyeyaal ah oo xoog leh. Markaan isu nimaadno si aan ugu codeyno musharixiinta iyo arrimaha muhiimka u ah beesheena, waxaan badali karnaa qaab dhismeedka awooda waxaanan saameyn ku yeelan karnaa siyaasada si aan ugu sii shaqeyn karno xaafadeena.
Dutchtown Go'aansaday video by Isgoyska Grand.
Raadi Goobtaada Codbixinta
Ogow Intaadan Tegin
Waa Maxay Ansixinta Codbixintu?
Nidaamka cusub ee oggolaanshaha codeynta, St. Louisans waxay u baahan doonaan inay wax ka beddelaan caadooyinka codbixinta. Soo bandhigida doorashooyinka labada Maarso iyo Abriil waa ka muhiimsan yihiin sidii hore.
Codeynta ansixinta waa nidaam doorasho oo codbixiyayaashu ay dooran karaan tiro kasta oo musharraxiin doorbid ah, halkii ay ka dooran lahaayeen hal keliya. Cod-bixiyeyaashu waxay ansixiyeen nidaamka cod-bixinta ee oggolaanshaha cusub markii ay si aqlabiyad leh u taageereen Soo-jeedinta D doorashadii Noofembar 2020.
Maaddaama codbixinta oggolaanshuhu ka dhaqan gashay magaalada St. Louis, waxaan sii wadi doonnaa inaan yeelano laba doorasho degmo - doorashada hordhaca ah ee bisha Maarso iyo doorashada guud ee Abril. Horudhaca ayaa ah meesha aad "ku ansaxiso" musharixiinta si aad ugu gudubto doorashada guud, taas oo u shaqeysa sida doorashada ku celiska ah.
Doorashada Aasaasiga ee Maarso
Inta lagu jiro doorashada hordhaca ah, waxaad u codeyn kartaa qof kasta iyo dhammaan musharaxiinta aad aqbasho. Mid, laba, dhammaantood, ama, midna-sikastaba iyo ciddaad doorato adigaa iska leh. Xulashadaadu waxay asal ahaan sheegaysaa doorbid, ama inaad oggolaan lahayd in murashaxiintani ay ku jiraan doorashada guud. Si ka duwan nidaamka codbixinta xulashada, dhammaan oggolaanshahaaga waxay leeyihiin miisaan isku mid ah.
Nidaamka cusub ee codeynta ansixinta, ku xirnaanshaha xisbiyada waa laga saaray. Maaddaama doorashada asaasiga ahi aysan ahayn xisbi, mar dambe uma sheegi doontid shaqaalaha codbixiyaha nooca cod-bixinta ee aad u baahan tahay - qof kastaa wuxuu leeyahay xulashooyin isku mid ah wuxuuna helayaa isla warqadda cod-bixinta. In kasta oo musharrixiin badani weli muujinayaan astaamahooda xisbi, ma arki doontid calaamadda Dimuqraadiga ama Jamhuuriga ee warqadda codbixinta.
Doorashada Guud ee Abriil
Labada musharrax ee hela oggolaanshaha ugu badan ee hordhaca ah waxay u gudbayaan doorashada guud ee Abriil. Iyada oo garoonka lagu soo koobay laba kaliya labo, codadka intooda badan (50% + 1) ayaa looga baahan yahay in lagu guuleysto. Doorashada guud, waa inaad doorataa hal murashax oo keliya. Musharaxa ugu codka badanna wuxuu udhaqaaqayaa inuu qabto xafiiska.
Sidee Loo Shaqeyn Jiray
Markii hore, doorashooyinka dawladaha hoose ee St. Louis waxay ku lug lahaayeen doorashooyin horudhac ah oo xisbiyeed bishii Maarso oo ay ku xigtay doorasho guud bishii Abriil. Waxaad codsan laheyd warqad codbixin ah oo aad siineyso xisbiga aad dooratay (Dimuqraadi, Jamhuuriya, iwm) ka dibna waxaad dooran laheyd musharaxa u bixi lahaa inuu matalo xisbigaaga doorashada guud.
Maaddaama ay u janjeeraan dhinaca Dimuqraadiga ee St. Louis (dhammaan dadka magaalada lagu soo doortay waa Dimuqraadiyiin), dad badan ayaa tixgeliyey doorashada aasaasiga ah inay tahay "doorashada". Mid kasta oo musharrax ah ee ku guuleysta doorashada horudhaca ah ee Dimuqraadiga wuxuu la kulmi doonaa wax yar ama tartan tartan guud oo bisha Abriil ah. Sidan oo kale, ka qeybgalka doorashada bishii Abriil caadi ahaan wey ka yaraayeen doorashadii hordhaca ahayd ee bishii Maarso.
Diyaar u noqo! Baro musharixiinta oo go'aan ka gaadh cidda u qalanta oggolaanshahaaga. Haddii aanad ku xirnayn axsaabta si aad u hagto codbixiyayaal badan, waxaad u baahan doontaa inaad ogaato magacyada musharrixiinta oo aad hubiso inay taageerayaan siyaasadaha aad sameyneyso.
Ku samir goobaha codbixinta! Maskaxda ku hay in nidaamka codeynta ansixinta ay tahay mid cusub. Waqti u qaado si aad u hubiso inaad fahantay cidda aad u codaynayso, isla markaana aad waqti siiso asxaabtaada codbixiyaasha ah. Qorsheyso daqiiqado dheeri ah oo dheeraad ah markaad u socoto doorashada.
Adkow noqo! Waxaa laga yaabaa inaad codaysay Maarso, laakiin doorashada Abriil waxay haysaa muhiimad iyo qiime cusub. Tus doorashada illaa iyo doorasho kasta.
Waxaad awoodi kartaa hel goobta codbixintaada bogga Guddiga Doorashada. Goobtaada doorashada ayaa sidoo kale lagu qori doonaa kaarka ogeysiiska doorashada ee ay tahay inaad ku hesho boosta kahor doorashada.
Goobaha Codbixinta ee Xaafadda Weyn ee Dutchtown
Goobaha hoos ku taxan waa goobaha codbixinta ee ka shaqeeya inta badan xaafadeena. Hubso inaad xaqiiji goobtaada codbixinta adoo ka raadinaya cinwaankaaga bogga magaalada.
Goobaha codbixinta waxay furan yihiin 6da subaxnimo ilaa 7da fiidnimo.
Xarunta Hal-abuurka Xaafadda, 3207 Meramec Street
Hoolka Cuntada Grbic, 4071 Wadada Keokuk
Dugsiga Hoose ee Froebel, 3709 Nebraska Avenue
Dugsiga Hoose ee Meramec, 2745 Meramec Street
Hoolka Gambrinus, 3650 Wisconsin Avenue
Thomas Dunn Xarunta Waxbarshada, 3113 Wadada Gasconade
Dugsiga Hoose ee Woodard, 725 Bellerive Boulevard
Dugsiga Dhexe ee Dheer, 5028 Morgan Ford Road
Qaybaha 9aad, 11aad, iyo 13aad ayaa leh goobo codbixin oo dheeri ah guud ahaan u adeegta aagagga ka baxsan xaafadda Greater Dutchtown. Mar labaad, hubi inaad fiiri goobtaada codbixinta si loo hubiyo inaad aadeyso meesha saxda ah.
Aqoonsi sawir looma baahna! Jeeg jeega mushaarka ama biilka korontada ee hadda jira oo cinwaankiisu yahay codbixin waa la aqbali karaa.
Haddii dhaqdhaqaaqaagu xadidan yahay waxaa laga yaabaa inaad ka codeyn karto "dhinac" ama ka baxsan goobta doorashada. Waa inaad tagtaa goobtaada codbixinta oo aad weydiisataa qof inuu galo oo aad weydiiso shaqaalaha codbixinta inay kuu keenaan codbixinta. Shaqaalaha codbixinta waa inay kuugu keenaan warqad codbixin ah waqti macquul ah gudahood.
Haddii lagaa celiyo doorashada sabab kasta ha noqotee, hubi in garsoorayaasha doorashadu u yeeraan Guddiga Doorashada Magaalada. Haddii aysan weli xaqiijin karin inaad awood u leedahay inaad wax doorato, weli sharci ahaan waxaa looga baahan yahay inay ku siiyaan warqad cod-bixin ku-meel-gaar ah. Kahor aqbalida codbixinta ku meel gaarka ah, call 1-866-CODKAAGA (1-866-687-8683) si looga wada hadlo xulashooyinka.
Haddii lagugu xukumay dambi fudud ama dambi culus, laakiin aad dhammaysatay xukunkaagii (oo ay ku jiraan tijaabinta ama sii-daynta sharafeed), Xaq ayaad u leedahay inaad cod bixiso, laakiin waa inaad dib isu diiwaangelisaa Haddii qof aad taqaan uu ku jiro xabsi xabsi-maxkamadeed kahor, waxay xaq u leeyihiin inay codeeyaan maqnaanshaha.
Cod Bixiye Markii Ugu Horaysay
Haddii aad isdiiwaangelineyso inaad codeyso markii ugu horeysay, marka lagu daro foomka diiwaangelinta, waxaad sidoo kale u baahan doontaa inaad bixiso nooc ka mid ah aqoonsi. Noocyada Aqoonsiga ee la aqbali karo waxaa ka mid ah:
Aqoonsi sawir sax ah
Sanduuqa 3 ee arjiga, waxaad calaamadeyn doontaa sanduuqa "diiwaangelinta cusub".
Hubso inaad ku bixiso cinwaanka gurigaaga dhabta ah sanduuqa 5. Haddii cinwaankaaga boostada uu ka duwan yahay, waxaad ku qori kartaa macluumaadkaas sanduuqa 6.
Haddii aad guurtay tan iyo markii ugu dambeysay ee aad isdiiwaangelisay si aad u codeyso, waxaad u baahan doontaa inaad cusboonaysiiso diiwaangelintaada cod-bixiyaha. Haddii aad u guurtay gudaha Magaalada St. Louis, sanduuqa 3 waxaad calaamadeyn doontaa "sanduuqa beddelka". Haddii aad ka guurtay maamul kale (tusaale ahaan: waxaad ka soo guurtay degmada St. Louis una guurtay magaalada St. Louis), waa inaad ka hubisaa “diiwaangelin cusub” sanduuqa 3aad.
Hubso inaad ku siiso cinwaanka gurigaaga dhabta ah sanduuqa 5. Haddii cinwaankaaga boostada uu ka duwan yahay, waxaad ku qori kartaa macluumaadkaas sanduuqa 6. Sanduuqa 12, waxaa lagu weydiin doonaa inaad keento cinwaankii aad markii hore ka diiwaangashanayd inaad ka cod bixiso.
Haddii aad haysato laysanka darawalnimada, waxaa lagaa doonayaa inaad ku qorto lambarkaaga shatiga sanduuqa 7. Haddii aad leedahay lambarka Sooshiyaal Sikiyuuritiga, waxaa lagaa doonayaa inaad geliso afarta lambar ee ugu dambeeya ee SSN-kaaga ee ku jira sanduuqa 8. dhalashada sanduuqa 9.
Goobta dhalashadaada iyo lambarka taleefankaaga (sanduuqa 10 iyo sanduuqa 11) looma baahna.
Sanduuqa 13aad, qir in macluumaadka aad dhiibtay uu sax yahay, ka dib saxiix iyo taariikhda dalabkaaga.
Halkee laga Diiwaangeliyaa
Waxaad awoodi kartaa hubi heerka diiwaangelintaada or isdiiwaangelinta cod bixinta oo ku taal bogga Xoghayaha Gobolka ee Missouri.
Waad heli kartaa a Codsiga diiwaangelinta cod-bixiyeyaasha ee PDF ka socda bogga Magaalada St. Louis, ka dibna daabac oo boosta ku soo dir foomka.
Ama waxaad iska diiwaan gelin kartaa shaqsi ahaan goobaha soo socda:
Guddiga doorashada ee St. Louis
Waaxda Dakhliga Waaxda Gawaarida (xafiisyada shatiga / DMVs)
Goobaha Maktabadda Dadweynaha ee St.
Liistada Cod-bixiyaha oo aan firfircooneyn
Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad xaqiijiso inaad tahay ma ku saabsan Liistada Cod-bixiyaha oo aan firfircooneyn. Haddii Guddiga Doorashadu uusan xaqiijin karin cinwaankaaga, waxaad ku dambeyn kartaa liiska. Si loo hubiyo inaad liiska ku jirto iyo in kale, booqo bogga Guddiga Doorashada.
Waa laguu oggol yahay inaad wax doorato, xitaa haddii aad ku jirto Liistada Cod-bixiyeyaasha Aan Firfircoonayn. Qaar ka mid ah talaabooyinka dheeraadka ah ayaa loo baahan doonaa markaad u codeyso, markaa fadlan naftaada u oggolow waqti dheeri ah.
Cod-bixiyeyaasha rajada ka qaba in aysan booqan karin goobtooda cod-bixinta ee caadiga ah Maalinta Doorashada waxay xaq u leeyihiin inay codsadaan warqadda cod-bixinta maqnaanshaha. Sababaha la aqbali karo ee maqnaanshaha codbixinta waxaa ka mid ah:
Maqnaanshaha Maalinta Doorashada
Karti la'aan ama xabsi ku xirnaan jirro ama naafo darteed
Aaminsanaanta diinta ama ku dhaqanka
Shaqaalaynta hay'ad doorasho (kama khusayso shaqaalaha ololaha)
In aad kujirto xabsi (waa la siiyaa dhamaan shahaadooyinka codbixinta)
Waxaad awoodi kartaa soo dejiso arjiga codeynta ee maqnaanshaha iyo hel tilmaamo dheeraad ah bogga Magaalada.
Waraaqaha maqnaanshaha waxaa loo geyn karaa Guddiga Doorashada shaqsi ahaan ama waxaa lagu soo diri karaa boostada. Booqo Bogga Guddiga Doorashada faahfaahin buuxda.
* Macluumaadka lagu bixiyay degelkan sinaba looguma talagalin inay ka tarjumaan taageerida, ama ka soo horjeedka, murashax kasta, xisbi siyaasadeed, ama arrin ku saabsan codbixinta DT2 • Downtown Dutchtown, Degmada Horumarinta Bulshada ee Dutchtown, ama urur kale. Macluumaadkan waxaa loo bixiyay si adag ujeedada waxbarashada cod-bixiyaha. Back to top.
La wadaag boggan Facebook, Twitter, ama maraya Email. Boggan waxaa markii ugu dambeysay la cusbooneysiiyay April 22nd, 2021 .
DutchtownSTL.org Go'aaminta Dutchtown: Codee!